प्रदेश २ ले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र पीडितलाई सहयोग गर्न छुट्टै कानुन बनाउने - Charchit Entertainment!
Home bjob प्रदेश २ ले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र पीडितलाई सहयोग गर्न छुट्टै कानुन बनाउने
१२ पुस, वीरगञ्ज । प्रदेश २ सरकारले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा पीडितको सहायताका लागि छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले फरक लिंगको भएकै आधारमा हुने विभेद न्यूनीकरण तथा समस्यामा परेको अवस्थामा सहयोग गर्न कानुनी व्यवस्था र संयन्त्र अपरिहार्य देखिएको बताए ।
‘लैंगिक हिंसामा परेका पीडितहरुले न्यायका लागि लड्नुपर्दा विस्थापनको अवस्था आउँछ । त्यस अवस्थामा परिवारको साथ सहयोग नमिल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिलाउन र विस्थापनको अवस्थामा साथ दिन एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ, आवश्यक पर्दा खर्च गर्न कोष हुनुपर्छ । ऐन, कानुन, निर्देशिका बनाएर संयन्त्र र स्थायी कोष नै खडा गर्छौं ।’
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले प्रभाव र दवावका कारण लैंगिक हिंसामा परेका कमै पीडितले मात्रै न्याय पाउने गरेको बताए । ‘पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई आत्मसम्मान दिएपछि मात्रै न्याय प्राप्ती हुन्छ । तर हामीकहाँ अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायमा प्रभाव र दवाव दिइन्छ । त्यसले गर्दा पीडितले जुन किसिमको न्याय पाउनुपर्ने हो त्यसबाट बञ्चित हुन्छन् ।’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘सामाजिक न्याय सम्पादनमा कहाँनेर चुक्यौ ? त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, वीरगञ्ज लेडिज सर्कल र डेपुटी मेयर्स क्लबले संयुक्त रुपमा वीरगञ्जमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गठन गरेको जिल्लास्तरीय लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जालको कोषमा ५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे । अन्य पालिकाका प्रमुख र रमेश पटेल लगायत केही प्रदेश सभा सदस्यले पनि कोषलाई रकम दिने आश्वासन दिएका छन् । सञ्जालको कोषमा क्रमशः ५ लाख, ४ लाख र ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिन महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई आग्रह गरिएको थियो ।